Sdị, Agba na Mmetụta | Martech Zone
Abụ m ọkpọ maka a acha infographic na a infographic si Logo Company bụ ezigbo.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ ụzọ anyị si emeghachi na agba ruo ọtụtụ afọ. Colorsdị ụfọdụ na-eme ka anyị nwee mmetụta n'ụzọ ụfọdụ banyere ihe. Ruo oge onye mmebe ahụ maara ihe agba na mmetụta ndị a bụ, onye mmebe ahụ nwere ike iji ozi ahụ iji nyere aka weta azụmaahịa ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ndị a abụghị iwu siri ike na ngwa ngwa mana ndị na-ese ihe maara ihe na-eji ozi ahụ eme ihe maka ndị ahịa ha. Ihe omuma ihe omuma a na-ekpughe mmetụta uche na àgwà ndị ama ama ama ama ama ama. The Psychology agba bụ naanị otu akụkụ nke mgbaghoju anya mana echere m na ị ga-ekweta na ọ bụ akụkụ dị oke mkpa na ya.
Tags: ụdịagbammetụta uchelogos
Ndị mmadụ biputere, Ndi mmadu gbasara aka